Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Dhacdada Mataanaha Cusub ee Skal ee Rome, Budapest, iyo Madrid Maanta
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Hangari News • Italy War Deg Deg Ah • News • Wararka Spain • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Iyada oo ay ilaalinayaan Waaxda Dhacdooyinka Waaweyn, Ciyaaraha, Dalxiiska ee Degmada Rome iyo salaantii xildhibaanka cusub, Alessandro Onorato, xaflada mataanaynta ee u dhaxaysa Skal Roma iyo Skal Budapest ayaa dhici doonta maanta oo Sabti ah, December 4, 2021 , Garoonka Domitian Stadium (Piazza Navona) - Skal Madrid iyadoo ay joogaan Mrs. Andrea Bocsi, Xoghayaha Skal Budapest, oo matalaya Madaxweynaha, Peter Javorkai oo ay weheliyaan Mr. Juan Francisco Rivero, Madaxweynaha Skal Madrid, iyo Luigi Sciarra, Madaxweynaha Skal Roma.
Xafladda oo dhacday 11:00 subaxnimo ayaa lagu saxiixay heshiiska heshiiska mataanaynta Skal oo u dhexeeya saddexda caasimadood ee Yurub iyada oo shahaadooyinkii la guddoonsiiyey saddexda guddoomiye kooxeed.
Golaha Maamulka Skal Roma Waxa kale oo ka soo qayb galay xubno ka socday golaha sare ee Skal Italia, madax ka socotay kooxaha Skal Italia, ururada ganacsiga ee caasimada iyo saxaafada Talyaaniga iyo ajaanibka.
David Fontanella, Madaxweynaha Skal Switzerland; Nicolle Martin, Madaxweynaha Skal Côte d'Azur; Marie Ranisova, Khasnajiga Skal Praga; Armando Ballarin, Madaxweynaha Skal Italia; iyo Franz Heffeter, Madaxweynaha SKAL Yurub ayaa goob joog ka ahaa salaan muuqaal ah.
Hindisaha ujeedadiisu tahay in la hirgeliyo kor u qaadista dalxiiska ee Rome, Budapest, iyo Madrid iyada oo loo marayo abuurista mashaariic wadaag ah, waxaana looga golleeyahay in la dhiso inta u dhaxaysa naadiyada saddexda caasimadood, taangiga fekerka ee hoggaamiyeyaasha dalxiiska si ay isweydaarsadaan khibradaha iyo iskaashiga macnaha guud ee aragti dhaqameed oo ballaadhan.
Ballanta mataanaynta ah ee u dhaxaysa Rome, Budapest, iyo Madrid waxay ujeedadeedu tahay in la xaqiijiyo doorka Skal Roma oo ah Safiirka aagga Rome iyo meelaha dalxiiska iyada oo diiradda la saarayo dalxiisayaasha imanaya. Ujeedada ayaa ah in laga wada shaqeeyo Skalleghi ee labada caasimadood iyo dhamaan naadiyada kale ee Spain iyo Hungary, iyo sidoo kale ku dhawaad ​​13,000 xubnaha Skal International, oo loo qaybiyey in ka badan 350 naadi oo ku yaal 101 wadan.
Tani waa fursad weyn oo loogu talagalay muuqalka, sawirka, iyo meelaynta in Skal kaliya uu ku xaqiijin karo Rome xubnaheeda.
Iyada oo qayb ka ah hawlaha Skal International, mataaneynta waa mid ka mid ah hindisayaasha la qorsheeyay si loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya naadiyada gaarka ah iyada oo ujeedadu tahay horumarinta mashaariicda guud iyo in la kobciyo aqoonta magaaladooda dhammaan xubnaha Naadiyada Skal ee jooga.
Tani waa sababta Rome ay horeba u leedahay 8 magaalo oo mataano ah, gaar ahaan naadiyada Skal Girona/Barcelona, ​​Paris, Berlin, Stockholm, Prague, Istanbul, Mexico City, iyo New Jersey iyo maanta iyada oo mataanaynta labanlaab ee maanta Skal International Rome ay keentay. Magaalooyinka mataanaha ah ilaa 10 ayaa raacaya dariiqa cilaaqaadka sii xoogaysanaya ee caasimadaha Yurub ee ay leeyihiin Skal Europe, oo lagu baabtiisay Rome sanadka 2019 munasibada 70aad ee Skal Roma. Tani waa istaraatiijiyad lagu sii ururinayo qiyamka Skal ee Yurub iyo in laga dhigo magaalada daa'imka ah xudunta Yurub: Dhammaan waddooyinka waxay bilaabaan oo u horseedaan Rome
Mataanayntu waxa ay saamaxaysaa in la furo xitaa xidhiidh saaxiibtinimo iyo ganacsi, rukunno aasaasi ah oo ruuxa wada shaqayneed ee Skal International uu ku salaysan yahay u hoggaansanaanta hal-ku-dhegga "Ka ganacsiga asxaabta dhexdooda."
Si kor loogu qaado dalxiiska dhaqanka, xafladda ka dib, barnaamijka waxaa ka mid ahaa booqasho uu Ara Pacis iyo maalintii Axadda barakada Aabbaha Quduuska ah Pope Francis ee St. Peter's Square.
Rome Skal Day waxay ku dhammaatay is-bedelkii ugu horreeyay ee 2021, inta lagu gudajiray Abaalmarinta Tayada Skal Awards 2021 ayaa la bixiyay. Munaasabadda ayaa ka dhici doonta huteelka Quirinale, iyada oo loo sii marayo Nazionale 7, 8:30 pm ee Diisambar 4 si ay ula kulmaan 2 sano oo xubno, saaxiibo, iyo marti ah.
#sarka caalamiga ah
Diisambar 5, 2021 at 06:02
Waan ogahay, Maareynta Maaliyadeed waa daraasad ku saabsan qorsheynta, naqshadeynta, hagidda iyo maareynta dhaqdhaqaaqyada dhaqaale sida ka faa'iidaysiga raasumaalka iyo la wareegidda shirkadda. Dhammaan saddexda cutub waxay ka faa'idaystaan ​​isku darka cusub ee diiwaannada maamulka iyo barnaamijka dhaqaalaha.